नेकपाको अभियान टोली सल्यानको रागेचौरमा पुग्यो, के भन्छन् नेताहरु ? « Postpati – News For All
नेकपाको अभियान टोली सल्यानको रागेचौरमा पुग्यो, के भन्छन् नेताहरु ?
माघ १३, सल्यान । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सल्यानले संगठन सुदृढिकरण तथा विस्तार अभियान सिजन २ को जनसभा कुमाख गाउँपालिकाको रागेचौरमा सम्पन्न गरेको छ ।
आइतबार सयौँको सङ्ख्यामा उपस्थित जनसमुदायलाई पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चिरन पुनले सम्बोधन गरेका हुन् । उनले आफनो पार्टीले संचालन गरेको संगठन सुदृढिकरण तथा विस्तार अभियानको बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
प्रमुख अतिथि रहेका पुनले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचार र कालोबजारीका विरुद्ध सशक्त रूपमा सङ्घर्ष गर्ने बताउँदै अबको आन्दोलनले दलाल सत्तालाई ध्वस्त पारिछाड्ने दाबी गरे ।
नेता पुनले जनतालाई यो व्यवस्थाले शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र रोजगारी दिन नसक्ने भन्दै त्यसको विकल्प आफ्नो पार्टीले अगाडि सारेको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिले मात्र दिनसक्ने ठोकुवा गरेका थिए । साथै उनले एकिकृत जनक्रान्तिको कार्य्दिशा मार्फत बैज्ञानिक समादवाद स्थापना गर्ने आफनो पार्टीको अभियानमा साथ दिन जनतालाई अपिल गरे ।
कार्यक्रमलाई नेकपा दैलेखका इन्चार्ज रहेका सल्यान रुकुम अभियान टोलीमा सहभागी विवेकले पनि सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रमका अन्य अतिथिहरु नेकपा निकट युवा संगठन नेपालका अध्यक्ष पाटन जंगली, नेकपाका सल्यान इन्चार्ज विश्व लगायतका नेताहरुले सभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।
उनिहरुले पनि आफनो पार्टीको लडाई दलाल र भ्रष्ट्रचारका विरुद्ध भएको स्पस्ट पार्दै आवश्यक परे जनमुक्ति सेना गठन गर्ने बताएका छन् ।
पार्टीका कुमाख गाउँपालिका इन्चार्ज सागरको सभाअध्यक्षता भएको कार्यक्रमको संचालन गणेशले गरेका थिए । यसअघि नेकपा सल्यानले जिल्लाको मोलाहाल्ने, फारुला, थारमारे, दमाचौर झ्याम, ढोरचौरमा जनसभा सम्पन्न गरेको छ ।